Led High Bay Light - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Led High Bay Light)
Nke a UFO High Bay Ìhè na-enye n'elu 16500lm Ẹkot 600W omenala ọkụ. The UFO ikanam High Bay Light 150W nke kachasị mma maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ntanetị, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ngosi ihe ngosi, ụlọ ntụrụndụ, ámá egwuregwu, ụlọ ọrụ ntanetị, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ahịa...
100W Ọhụụ na-arụ ọrụ n'èzí na Nkwụnye
The Portable Light Guzosie jiri triangle nkwado, na -eme ihe na-ekpuchi ụkwụ, nkwonkwo dị elu ma na-eme ka nchekwa dị ọkụ. Telescopic imewe na-enye gị ohere ịgbanwe Led Tripod Light n'ime ebe ị chọrọ, ọ na-ejikwa T-shaped bar, ọ nwere ike ijide otu ìhè ma ọ bụ ọkụ 2. Nke a na-eji ígwè siri ike rụọ ọrụ siri ike,...
Sensor Motion 100W UFO Led High Bay
Ezubere 100w UFO Led High Bay iji dochie 300 watt metal halide. Nke a 100W UFO Led High Bay Light na- emepụta 13,000 lumens na 5000K dị ọcha na agba okpomọkụ na-eji mgbagwojuru ụwa 120-277V. Ụlọ mmiri 100 Watt UFO Led High Bay nwere ihe eji emepụta aluminum, na-ejikwa anya elekere polycarbonate. Ụlọ nkwakọba ihe anyị...
240W Led High Bay Sistem Motion Lens
Nke a 300W UFO Led High Bay Light enye ọkụ ọkụ na 39000lm. Ihe dị na 240w Led High Bay Ụlọ Ahịa nwere ike dochie oriọna ọkụ ọkụ 800W-1000W ma zọpụta ike ruo 50%. Na IP65 mmiriproof rating, ị nwere ike iji Led High Bay UFO n'ihi na ebe ọ bụla mmiri ozuzo na-ezo na mmiri, mmiri ọkụ, ooh. Dị ka, njikọta njikọta...
UFO akwa akwa ìhè 150W Mere UFO High Bay Ìhè na-enye n'elu 19500lm Ẹkot 600W omenala ọkụ. LED High Bay Light 150W kachasị mma maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ntanetị, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ ngosi, ụlọ ngosi egwuregwu, ụlọ egwuregwu, ámá egwuregwu, ọdụ ụgbọ oloko, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ ọ...
150W UFO ada highbay USA / CANADA
UFO Led High Bay nyere ihe karịrị afọ 19500lm nke yiri ọkụ ọkụ ọkụ 600W. LED High Bay Light kacha mma maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa, ụlọ egwuregwu, ọdụ ụgbọ oloko, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ahịa na akwa akwa. Nhazi ọhụrụ ahụ bụ HighBay...
Led High Bay Light Ufo Led High Bay Light Led High Bay Light 150W Led High Bay Shop Lights Led High Bay Lighter 150W Alibaba Led High Bay Light 150W UFO Led High Bay Light 100W Led High Bay Lightlight